I-lentils ene-chorizo ​​​​ebabayo kanye ne-paprika | Ikhishi Recipes
UMaria vazquez | 26/12/2021 10:00 | Izitishi Namasobho Ungadliwa
Ngemuva kwezinsuku ezimbili zephathi lapho iningi lethu lidle izitsha esingazifaki kumamenyu ethu, kukhona abafuna ukubuyela esimisweni sethu. Ukupheka, isibonelo izitshulu ezifana nalesi kusuka i-lentile ene-chorizo ​​​​ebabayo ne-paprika, elula futhi eduduzayo.
Izitshulu ze-legume zibalulekile kumenyu yami yamasonto onke. Siyawadla, ngokuvamile, izinsuku ezimbili noma ezintathu ngesonto, njalo sizama ukushintsha uhlobo lwe-legume. Njalo ngiqala ukuzilungiselela nge isisekelo esihle semifino Futhi ukuthi nakuba okuye kwagqama esihlokweni i-chorizo ​​​​ebabayo ngenxa yokunambitheka okukhulu okunikelayo, inani lalokhu lincane kakhulu.
Kulesi sitshulu into ebalulekile yimifino: anyanisi, pepper kanye isanqante. Futhi kubalulekile ukuphana ngalezi. Uma nawe unawo ama-leek ekhaya ungawengeza futhi azobukeka ngendlela emangalisayo. Ngiyakukhuthaza ukuthi uzame le ndlela yokuzenza; Ngiyaqiniseka ukuthi uzowajabulela.
Lawa ma-lentile ane-chorizo ​​​​okubabayo kanye ne-paprika aduduza kakhulu, alungele ubusika. Futhi banesisekelo esibalulekile semifino njengoba uzoba nesikhathi sokubona.
1 anyanisi omkhulu obomvu
2 izaqathe ezinkulu
1 upelepele oluhlaza wase-Italy
½ upelepele obomvu ogazingiwe
Izingcezu ezi-6 ze-chorizo ​​ebabayo
240 g. udali
Siquma u-anyanisi, upelepele kanye nesanqante ehlutshiwe.
Sifaka izipuni ezimbili zamafutha omnqumo epanini futhi sitosa imifino phakathi nemizuzu engama-10.
Ngemuva kwalokho engeza i-chorizo ​​​​eqoshiwe futhi inyakaze ize iqale ukukhulula amafutha ayo.
Ngakho, engeza utamatisi ochotshoziwe, i-paprika kokubili amnandi futhi okubabayo, kanye nenkathi. Sihlanganisa futhi sipheke imizuzu embalwa.
Ngemuva engeza udali futhi phezulu ngokukhululekile ngomhluzi wenkukhu.
Siyamboza futhi pheka imizuzu engama-18 phezu kokushisa okuphakathi nendawo. Okulandelayo, sembula futhi sipheke eminye imizuzu emihlanu phezu komlilo ophakathi noma kuze kube yilapho eseqedile.
Khonza ama-lentile nge-chorizo ​​​​ebabayo eshisayo kanye ne-paprika.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Izitishi Namasobho Ungadliwa » I-lentils ene-chorizo ​​​​ebabayo ne-paprika